Biodegradable PLA မှအကောင်းဆုံး Biodegradable PLA မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် Biodegradable PLA, PBS BIO မှ, Biodegradable Plastic Sheets များ အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး Biodegradable PLA ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Biodegradable PLA ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
အကောင်းဆုံးကဘာလဲBiodegradable PLA ?
Polylactic Acid (PLA) သည်“ eco-friendly” အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက် block တွင်အသစ်စက်စက်ကလေးဖြစ်သည်၊ ဤရေနံပလပ်စတစ်အစားထိုးသည်၎င်း၏ biodegradable အဖြစ်အမွှမ်းတင်ထားသည်။ ငါတို့Biodegradable PLA PBS BIO မှ , Biodegradable Plastic Sheets များ , PLA ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ , PLA သည် Biodegradable ဖြစ်သည် , Biodegradable ပစ္စည်း နှင့် Biodegradable Disposables များ ပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်သောပလတ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောဇီဝအခြေခံပေါ်လီမာ masterbatch ဖြေရှင်းချက်များပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမားရိုးကျရေနံအခြေခံပိုလီမာများကဲ့သို့ Biodegradable Masterbatch
Biodegradable Injection Molding ထုတ်ကုန်များသည်ပလတ်စတစ်နှင့်ဆင်တူသောဂုဏ်သတ္တိများကိုပေးသည်၊ ဒါပေမယ့်လည်း Biodegradable ၏ထူးခြားသောအားသာချက်ကိုထပ်ဖြည့်သည်။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည်တိုတောင်းသောသက်တမ်း (သို့) သုံးပြီးသည်နှင့်စုဆောင်းရန်ခက်ခဲသောအပလီကေးရှင်းများပေါ်တွင်အဓိကထားသည်။ သင်ချစ်ခင်ရသူအားဂုဏ်ပြုရန်သူတို့၏ပြာများကိုမြေကြီး၌မြှုပ်ရန် (သို့) ပင်လယ်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Biodegradable Urn များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကို ၁၀၀% သဘာဝပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသဘာဝအားဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပျက်စီးစေသည်။ နောက်ထပ်လိုအပ်တာရှိရင်ပြောပါBiodegradable PLA ကျေးဇူးပြု၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။